छोटो समयमा महिला लघुवित्तको शेयरधनीले कमाए आकर्षक मुनाफा, शेयर मूल्य प्रतिकित्ता रू. ३१२५ पुग्यो
वैशाख १७, काठमाडौं । महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडका शेयरधनीनै छोटो समयमानै आकर्षक प्रतिफल पाएका छन् ।
कारोबारमा आएको २८औं दिनसम्म कम्पनीको शेयर मूल्य सर्किट लेबलमा वृद्धि हँुदै आएको छ । कम्पनीको शेयर कारोबार आएको पहिलो दिन रू.४४६ मा खुला भएको र सोही मूल्यमा तीन दिनसम्म कारोबार भएको थियो ।
त्यसपछिको चौथो कारोबार दिनदेखि कम्पनीको शेयर मूल्य २८ औं दिन आइपुग्दासम्म सर्किट लेबलमा वृद्धि हुँ दै आएको छ । सोही कारण महंगोमा पनिे शेयर खरीदगर्नेहरुको संख्या धेरै भएकाले कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको हो ।
साताको अन्तिम कारोबार दिन अर्थात् बिहीवार पनि कम्पनीको शेयर मूल्य १० प्रतिशतले वृद्धि भएर रू. ३ हजार १२५ पुगेको थियो । उक्त दिन कम्पनीको १ हजार ८५० कित्ता शेयर खरीदविक्री भएको छ ।
बिहीवार भने कम्पनीको हालसम्मै धेरै कित्ता शेयर खरीदविक्री भएको छ । रू.१ हजार लगानी गरेको १० कित्ता आईपीओको मूल्य एक महीना पनि नपुग्दै रू. ३१ हजार पुगेको छ । त्यसोत दोस्रो बजारमा उक्त कम्पनीको शेयर खरीद गरिरहेका लगानीकर्ताले पनि छोटो समयमै आकषृक मुनाफा कमाएका छन् ।
कम्पनीको शेयर पहिलो कारोबार दिन प्रतिकित्ता रू. ४४६ मा कारोबार भएको थियो । कम्पनीले पहिलो कारोबारका लागि रू. ३१३ दशमलव १६ देखि ९३९ दशमलव ४८ ओपन रेञ्ज पाएको थियो ।
नेप्सले पहिलो कारोबारका लागि नेटवर्थको तीन गुणासम्म मूल्य रेञ्ज तोक्ने गर्दछ । कम्पनीले गत माघ २८ गतेदेखि फागुन २ गतेसम्म ४ लाख कित्ता आईपीओ निष्कासन गरेको थियो ।
कम्पनीले ५ हजार कित्ता कर्मचारीको लागि, २० हजार कित्ता सामूहिक लगानी कोषको लागि र बाँकी रहेको ३ लाख ७५ हजार कित्ता आईपीओ सर्वसाधारणको लागि निष्कासन गरेको थियो । कम्पनीको आईपीओ ३७ हजार ५०० जनाले गोलाप्रथाद्वारा १० कित्ताका दरले पाएका थिए ।
७ अर्बभन्दा माथिको शेयर कारोबार, नेप्से परिसूचकमा १०.१३ अंकको वृद्धि[२०७८ बैशाख, ३०]
तेस्रो त्रैमासमा महालक्ष्मी लाईफ इन्स्योरेन्सको बीमाशुल्क २२% बढ्यो[२०७८ बैशाख, ३०]
साढे ४ अर्बको शेयर खरीदविक्री भएको बजारमा पुनर्बीमा कम्पनीको सर्वाधिक कारोबार (२ बजेको अपडेट)[२०७८ बैशाख, ३०]
तेस्रो त्रैमासमा एशियन लाईफ इन्स्योरेन्सको नाफा ३९% बढ्यो[२०७८ बैशाख, ३०]